जग्गा जमिन समेत गयो संगीत क्षेत्रमा लागेर, तर हिम्मत हारेको छैन –रमेश शेसी ,लोक गायक तथा सर्जक (अन्तर्वार्ता ):: Sanchar Garage
जग्गा जमिन समेत गयो संगीत क्षेत्रमा लागेर, तर हिम्मत हारेको छैन –रमेश शेसी ,लोक गायक तथा सर्जक (अन्तर्वार्ता )
सल्यान, फारुलामा बुवा काली शेसी र आमा पुनी शेसीको कोखबाट जन्मिएर धेरै रामो समयदेखि काठमाण्डौमा भित्रिएर गित सगितमा संघर्ष गरिरहेका लोक तथा दोहोरी गायक ‘रमेश शेसी’ त्यति चलेको नाम चै नहोला तर यो क्षेत्रमा उनले गरेको दुख र संघर्षका कुराहरु सुन्न लाएक छन्। आज हामी उनी रमेश शेसीसग हिराछ्बी श्रीशाले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरेका छौ।
नमस्कार स्वागत छ यहालाई संचार ग्यारेजमा।
” हजुर , नमस्कार धन्यवाद । ”
के छ कसरी बिताउनु भएको छ दिनहरु ?
“खासै केहि छैन ,डान्सिङ्ग गीत बनाउदैछु। एरेन्ज सकिदै छ त्यहि हो।
डान्सिङ्ग गीत भन्नु भो। कस्तो प्रकारको गीत हो यो ?
“टिपिकल दोहोरी नै हो हुन त ,अल्लि मोर्डन अनि फास्ट बिट भएकाले यसलाई डान्सिग गीत भनिन्छ। ”
कति भयो तपाइँ यो क्षेत्रमा लागेको ?
यस्तै करिब ४ -५ बर्ष जति भयो होला ।”
कति गीत बनाउनु भो यो क्षेत्रमा लागे पछि ?
बनाउन त १ दर्जन जति बनाएको छु तर ति गीतमा मेरो शब्द र लय रहेको छ र, ६ ओटा गीतमा मैले आवाज दिइसकेको छु। ”
यतिका समय भैसक्दा र कला गला दुवै हुदा हुदै पनि तपाइँ त्यति चर्चामा हुनुहुन्न कारण के हो ?
कारण त हजुर पैसा नै हो। म एउटा गरिब परिवारको मान्छे हु । ठुलो परिवार छ समस्या झन् ठुला छन् । अहिलेका गीत संगीतमा देखिने स्रोत साधनलाई किन्न सक्ने मेरो क्षमता पनि भएन। मिडियामा गीत बजाउन पनि सकिएन । कला र गला मात्र भएर पनि नहुने । त्यसलाई पस्कने माध्यम गुणस्तरिय भिडियो र मिडिया पनि हो । जहा मेरा सृजना पुग्न सकेन , कारण त्यो पनि हुन सक्छ।”
१ दर्जन गीत लय सबै दोहोरी मात्र हुन् कि अन्य विधामा पनि रहेका छन् ?
म लोक सगीत मन पराउने मान्छे। मलाइ लोक गीत बाहेक अरु विधामा खासै चासो लागेन । त्यसैले गर्दा पनि मैले सिर्जना गरेका शब्द लय पनि पूर्णरुपले लोक विधामै हुने गर्दछन। ”
पारिवारिक माहोल कस्तो थियो यहाको , गीत संगीतमा रुचि देखाउने खालका कोहि हुनुहुन्थ्यो कि थिएन ?
बिल्कुलै थिएन। सायद म मात्र थिए आफ्नालागि । ”
त्यसो भए तपाइलाइ यहासम्म आउनलाई परिवारको साथ भएन ?
“एकदम हजुर। त्यस्तो खालको पारिवारिक वातावरण नै थिएन र कसैको न समर्थन न सहयोग , केहि थिएन । स्कुल पढ्दा एकजना सरले मेरो गायिकी देखेर प्रससा गर्नुहुन्थ्यो हौसला बढाउनु हुन्थ्यो त्यति हो ।”
कसैको सपोर्ट बिना यहासम्म आउदा कस्तो अनुभव बटुल्नु भयो ?
“धेरै कठिनाइ धेरै दुख भोगे , भनेर साध्य छैन। । सानै छादा बाबा बित्नु भो ७ भाइ मात्र त हामि छोराहरु छौ। पढ्न पनि राम्ररी पाइन । सायद कसैले यो क्षेत्रमा आउदा त्यति दुख नपाएका होलान मैले त्यति दुख पाए । ”
अहिले गीत बनाउदै छु भन्नु भयो। कस्तो खालको गीत हो त्यसको बारेमा थोरै जानकारी दिनुहोस न ।
“अ त्यो गीतमा मेरो शब्द र सगीत रहेको छ। गीत डान्सिङ्ग दोहोरी गीत हो ,आवाज चै गाउकै भाइ आशिस मगरको राखिएको छ भने लेडिज आवाजको लागि अझै केहि सोचिएको छैन कसलाई राख्ने भनेर । गीतको बोल चै ‘खुल्लम खुल्ला प्यार ‘ हो। जे होस् राम्रो बनेको छ गीत ।”
यो क्षेत्रमा लागेर के कमाउनु भो के गुमाउनु भो ?
“कमाउन त खासै केहि कमाको छैन। चाहेको नाम कामाउन हो त्यो बिस्तारै होला। गुमाउन चै धेरै गुमाए । ”
के गुमाउनु भो ?
“अहिलेसम्म पैसा समय दुवै गुमाएको छु जग्गा जमिन पनि गुमाइसके । ‘
कसरी गुमाउनु भो जग्गा जमिन ?
“गएको वैशाकमा आफ्नो गाउ फारुलामा एउटा लोक दोहोरी कार्यक्रम राखेको थिए। लोक दोहोरी क्षेत्रका जान्ने मान्ने कलाकार मगाए। कार्यक्रममा दर्शक कम आइदिनु भो जसको कारण लगानी समेत उठेन। त्यो ऋण चुक्त्ता गर्न मैले खेत बेच्नु पर्यो। ”
किन आउनु भएन दर्शकहरु त्यत्रो कार्यक्रम राख्दा , देशका ठुला ठुला कलाकार बोलाउदा पनि ?
“त्यस बेला बैसाखको महिना गाउघरमा कामको मारामार थियो त्यसैले दर्शकको उपस्थिति धेरै कम भयो जसको कारण ठुलो घाटा बेहोर्नु पर्यो । ”
त्यसपछिको अबस्थामा परिवार सदस्यहरुको प्रतिक्रिया कस्तो आयो ?
“पहिला नै घर परिवारबाट खासै समर्थन नभएको अबस्था अझ त्यसपछि झन् जमिन नै बेच्नु पर्ने अबस्था आउदा त कस्तो प्रतिक्रिया आएहोला आफै बुझ्नुहोस्। ”
अब के गर्नु हुन्छ ? बिस्तारै हात निकाल्नु हुन्छ कि यो क्षेत्रबाट ?
“त्यस्तो हुदैन , यो क्षेत्रबाट निस्कने भए म पहिले निस्किसक्थे । अब त मरे पछि मात्र ”
यति दुख पाउदा यति ठक्कर पाउदा पनि तपाइमा यस्तो हिम्मत ? डर ,थकान लाग्दैन तपाइलाइ ?
“म पनि अरु जस्तै डर थकान सबै लाग्छ ,म गित सगीतमा डुबेर हराएको मान्छे हु। माग्ने हुला तर मा यो क्षेत्रलाई निरन्तरता दिनेछु। किनकि एकदिन मलाइ दर्शक स्रोताहरुले चिन्नु हुनेछ , बुझ्नु हुनेछ त्यस्तो खालको आसमा छु ।”
यो फिल्डमा लागेर तपाइले धेरै दुख पाउनु भो। धेरै संघर्ष गर्नु भो त्यहि पनि अझै तपाइँ बीच बाटोमा हुनुहुन्छ । अहिले यो क्षेत्रमा बुझेर या नबुझी आउनेको बाढि नै छ । त्यस्ता नया कलाकारहरुलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
“सगीत वा कलाकारीता क्षेत्र बाहिरबाट देख्दा जति सजिलो र रमाइलो देखिन्छ भित्र त्यति नै कष्टकर नरमाइलो छ। कहिँ कतै आफुसग कला क्षमता हुदा हुदै पनि त्यसको मुल्यांकन हुदैन । कसैको लहलहैमा लागेर न आउनु होला। आफुसग क्षमता भए पनि राम्ररि बुझेर मात्र यो क्षेत्रमा पाइला राख्नु होला भन्न चाहन्छु।”
तपाइँ लोक सगितलाइ माया गर्ने कलाकार। हिजो आजका लोक दोहोरी गित भित्र नेपालि लोक सस्कृति कहिँ देख्न मिल्दैन । पहिरन देखि लिएर गीतका शब्द अनि बाजा सबै बिदेशी हुन्छन । जसलाई परिवारसगै बसेर हेर्न र सुन्न पनि सहज छैन र तपाइले अहिले बनाउदै गरेको गीत पनि पक्कै बिदेशी प्याटनको हो के भन्नु हुन्छ ?
“हो , अहिलेको समयमा धेरै त्यस्ता गीत बनेका छन् जुन नेपाली बातावरणमा अल्लि पच्दैन। र कसैले बिरोध गरेका पनि छैनन् । त्यस्ता गीतले नेपाली लोक सस्कृतिलाइ पक्कै अन्धकारमा लागेको छ। त्यस्ता छाडापनले भरिएका गीतहरु ब्याण्ड हुनु पर्छ। जहासम्म बिदेशी बाजागाजाको कुरा छ। यो अहिलेका युवापुस्ताले मन पराउने प्याट्न हो। हामीले नबनाए पनि उनीहरुले बिदेशी सगीत हेर्ने सुन्ने गर्छन, हो तिनै दर्शकलाइ बाहिरी गीत सगितमा मन नजाओस भनेर मन बाध्नका लागि यस्ता गित बनेका हुन। र यस्ता गीतमा अस्लिलता हुदैन । पुराना स्वाद मन पराउनेका लागि त्यस्तै खालका गित पनि बनेका छन्।
यो अन्तरवार्ता पढे पछि कोहि दर्शक स्रोतलाई तपाइका गीत सगीत हेर्न सुन्न मन लाग्ला , कसरी सकिन्छ हेर्न र सुन्नलाई ?
“सजिलो छ। युटुबमा गएर रमेश शेसी टाइप गरेपछि मेरा सबै गित आउछन । ”
धेरै कुरा भोग्नु भो तपाइँ यो क्षेत्रमा लागेर। अब तपाइँ नाम कमाउन चाहनुहुन्छ कि दाम ?
“दाम त साझ बिहान २ छाक खान पुगे हुन्छ। दाम कै लागि आएको भए मा उहिले पलायन भैसक्थे यो क्षेत्रबाट । यो मेरो आत्मसन्तुष्टि हो त्यसैले नाम कमाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ।”
यस्तो अबस्थामा पनि तपाइँ लागिरहनु भएको छ । पैसा बिना यहाँ केहि हुदैन। कसरी सम्भव गराउनु हुन्छ यी असम्भव कुराहरुलाई ?
“पैसा मात्र सबै कुरा होइन। बिदेशमा दाइहरु भाउजु हुनुहुन्छ उहाहरुले धेरै थोरै सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। यहि पनि अग्रज दाइहरु हुनुहुन्छ जसले मेरो कलालाई चिन्नु भएको छ। पछि दर्शक स्रोतको पनि माया पाउला । चल्छ”
अन्त्यमा केहि भन्न चाहनुहुन्छ। आफुलाई मनमा लागेका कुराहरु ?
“त्यहि हो म सग कला गाला दुवै छ तर ठाउ पाइरहेको छैन। तै पनि हरेश खाएको छैन । मेरा गित सगीत सुनेर मलाइ पनि माया गरिदिनोस । हौसला बढाइदिनोस”
अबस्य पनि। ……. धैर्य र हिम्मत यसरी नै जारि राख्नुस एकदिन सफलता हासिल गर्नुहुनेछ डान्सिङ्ग गीतको लागि अग्रिम शुभकामना । यहा सम्म आइदिनु भो आफ्ना कुरा राखिदिनु भो धन्यवाद तपाइलाइ
धन्यवाद तपाइँ लगाएत संचार ग्यारेजलाइ मेरा मनका कुरा राख्न मौका दिनु भो त्यसको लागि आभारी छु। ”